Dr. Osaama Cismaan Waa Shaqsi Noocee Ah! |
Usama Cismaan — February 5, 2016
Dr. Osaama Cismaan Aadan waa xubin kamid ah qorayasha bogga Tuke Somalism kaas oo wax ka qora arrimaha bulshada, caafimaadka dadka , diinta iyo siyaasadda. Waxa uu ku dhashay wadanka Sucuudi Carabiya sanadku markuu ahaa 1989 gaar ahaan magaalada Makkah Almukarama.
Waxa uu kusoo qaatay waxbarshadiisi hoose iyo dhexe wadanka sucuudiga isaga oo kusoo bartay xifdinta Quraanka Kariimka ah markaas oo da’diisu aheyd 10 jir. Sidoo kalle waxa uu soo dhigtay tarbiyada islaamka waqtigaas oo uu joogay sucuudiga.
Kadib ayuu Soomaaliya usoo wareegay xilligaas oo waxbarashadiisi meesha kasii watay illaa heerka dugsi dhexe iyo sare uu ka dhameeyay iskuulada Imamu shaafici iyo iskoolka Hamdan Secondry School oo Xamar iyo Boosaaso ku kala yaalla sanadku markuu ahaa 2005-2006.
Waxaa uu ka qaatay iskuulka shahaadadii dugsiga sare ee ( high secondry school certificate) loo yaqaan. Kadib ayuu waxbarasho jamacadeed u raadsaday wadanka Yemen oo uu markaas deeq waxbarsho jamacdeed ah uu ka helay sanadku markuu ahaa 2008.
Waxaa ku biiray jaamacd kamid ah jaamacadaha Sanca ku yaalla oo la yiraahdo jaamacat Darulsalaam (Daralsalaam international university of science and technology ) waxaa uu ka baratay kulliyada caafimadka gaar ahaan barashada caafimadka qaliinka afka iyo ilkaha.
Sanadku markuu ahaa 2015 ayuu waxa uu ka qalinjabiyay jamacadda isagoo ka qaatay shahaado cadeynaysa dhameestirka heerka koowaad ee jamacadda qaybta ilkaha ee loo yaqaan becholar degree in( ORAL AND DENTAL SURGERY )
Waxaa uu kusoo laabtay wadankiisi hooyo isla waqtigaas uu jamacdda soo dhameestay sanadka 2015 xilligaas oo uu ka shaqo bilaabay isbitaalada ku yaal Muqdisho. Waxa uu kusoo biiray bahda qorayaasha Somaliyeed ee wax k u qora bogga Tuke Somalism kana faalooda wax bulshadeena waxtar u leh. Kuwaas oo ulajeedadooda koowaad ay tahay inay usoo gudbiyaan shacabkooda aqoonti ay kala yimaadeen wadanka dibadiisa.
Previous post Sidee Ku Noqoni Karaa Arday Ku Wanaagsan Waxbarashada?